Faritra arovana Manombo – Farafangana: “Tsy mitombina ny filazana hoe tsy misy politika maharitra” | NewsMada
Par Taratra sur 27/01/2021
Miantso fitoniana amin’ny rehetra hitodihana amin’ny andraikitra sy ny adidy, dia ny fiarovana ny ala sy ny zavaboahary, ny sampandraharaham-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana (Dredd).
Tokony hatsahatra, hoy ny Dredd (1) any Atsimo Atsinanana, ny fanakianana ny minisitera mpiahy. Tompon’antoka amin’izay tandrify azy ny olom-pirenena rehetra. Nampahalalana tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, fa tafiditra amin’ny paikady fiarovana ny ala sy ny zavaboahary any Atsimo Atsinanana, ny fanohanana ny talem-paritra amin’izay fandaharanasa faritany. Tsy marina ny fanaparitahana vaovao manambara ny antony naha may ny ampahany amin’ny valan-javaboahary arovana ao Manombo Atsimo, ny volana novambra 2020, distrikan’i Farafangana, raha ny filazan’ny Dredd Atsimo Atsinanana.
Tsy mitombina, raha ny nambaran’ny tompon’andraikitra ihany, ny filazana fa hoe tsy misy politika maharitra ho fiarovana ny ala. Tsy marina koa ny antontanisa nanitarana ny tranga nahamay ny valan-javaboahary Manombo. Misy ny fikambanana miaro ny tontolo iainana manohana ny fandaharanasa faritan’ny Dredd manoloana ny doro ala izay loza manambana mandavan-taona, loza manambana iray hafa ny rivodoza miantefa matetika any amorontsiraka atsimo atsinanana.
Nametrahana zana-kazo izao, ohatra, ny ao Manombo, ary arahi-maso sy hitarina ny fambolen-kazo any amin’ny faritra. Sokajy faha-IV amin’ny valan-javaboahary Manombo, 27 km avy eo Farafangana, araka ny namaritan’ny UICN(2) azy. Sokajy miavaka amin’ireo biby sy zavaboahary ao aminy. Ohatra, ahitana valo ireo karazam-biby mampinono ; 58 ny karazam-borona sy ny biby mandady. Maro amin’ireo tsy hita afa-tsy eto Madagasikara. Ny amin’ny zavamaniry indray, 90 % voasokajy manokana, ary tsy hita raha tsy ao ihany.
Dredd (1) : Direction régionale du développement durable
UICN(2) : Union Internationale pour la Conservation de la Nature